Maitiro Ekudzima Hutano Dhata kubva ku iPhone | IPhone nhau
Maitiro ekudzima Hutano data kubva ku iPhone
Iyi sarudzo inogona kuwanikwa nevashandisi vese uye iyo inotibvumidza kuti tikurumidze uye nyore nyore kudzima data rese kubva kuhutano Hutano mune imwe kudonha swoop. Ichokwadi kuti zvinoita sezvisinganzwisisike kuda kudzima iyi data kubva ku iPhone yedu, asi zvinokwanisika kuti isu tine nzvimbo diki pane chishandiso kana muICloud gore uye zvingave zvakanaka kwatiri kudzima imwe data kubva kuchinhu icho isu hatisi "kutarisisa zvakanyanya" kana. kuti iyo Health App inoita kuti zvive nyore kwatiri.
Nekuita izvi isu tinodzivirira kuve nekudzima mamwe magwaro, maapplication, mafaera kana mapikicha kubva kuchishandiso kuti uwane zvishoma zvekuchengetedza Tine sarudzo ye bvisa data rakaunganidzwa neMoyo, Chikafu, Kufunga, Kurara, nezvimwewo app zvakasununguka saka hatibvise rese data kubva kuapp. Tichaona maitiro ekuita ichi chiito zvakananga kubva kune yedu iPhone nenzira yakapusa.
Maitiro ekudzima data rehutano kuti uwane nzvimbo yekuchengetera
Chaizvoizvo, iyi nzira haisi yekuti inokwanisa kutisunungura seyakawanda nzvimbo sekuchenesa mafomu kana mamwe mafaera pane iyo iPhone, kunyange zvichinakidza kuziva kuti tinogona kuwana yakawanda yekuchengetedza nekuita izvi. Chinhu chekutanga chatinofanira kuita ndeche vhura iyo Hutano app kubva ku iPhone yedu:
Dzvanya pa Hutano data pasi uye isu tinoenderera mberi nehurongwa nekusarudza chero sarudzo dzingaonekwa, mune ino nyaya isu takasarudza «Kurota»
Zvino tinya pane sarudzo «Vhiki rino»Uye isu tinowana iyo data yakachengetwa nechishandiso:
Wobva wadzvanya pane sarudzo inoonekwa pazasi «Ratidza data rese»
Pamusoro kurudyi tinowana sarudzo Hora. Dzvanya pairi uye chiratidzo chinowanzoonekwa padivi kuti ubvise mamwe marekodhi akasununguka anosarudzwa.
Toda kudzima sei data rese tinya pamusoro kurudyi "Bvisa zvese" uye bvuma. Tinogona zvakare kusarudza kudzima data. Nenzira iyi tinowana nzvimbo yemahara. Chero zvazvingaitika, kana tiri mumwe wevaya vasingade kuti chiitiko chiitwe, tine sarudzo kuitira kuti isatarise nhanho, kurova kwemoyo uye imwe data yakachengetwa pa iPhone yedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekudzima Hutano data kubva ku iPhone
Iyo inotevera iPhone XR yaizosvika ine maviri matsva mavara
Powerbeats Pro ine IPX4 kushorwa kwemvura